China Pueraria lobata mitroka rano maloto puerarin 10% sy mpamatsy | Shaanxi Green Bio-Engineering
Ao amin'ny sehatry ny kosmetika, ny effet pétoestrogen an'ny puerarin dia afaka manamaivana ny soritr'aretina ateraky ny fihenan'ny haavon'ny estrogen sy ny fahanterana, toy ny mastoptosis, crinkle, fihenan'ny herin'ny hoditra sy ny leukotrichia. Noho izany dia matetika ampiasaina amin'ny crème de nono, crème maso ary crème d'expile.
1.Pueraria ampiasaina hanatsarana ny tsimatimanota sy hanakana ny sela homamiadana;
2.Pueraria dia manana fampiasana ny fiatraikany fiarovana amin'ny nephritis, nephropathy ary ny tsy fahombiazan'ny renal;
3.Pueraria miaraka amin'ny asany amin'ny fanamafisana ny hery fihenan'ny myocardial ary ny fiarovana ny sela myocardial;
4.Pueraria dia manana ny fahombiazan'ny fiarovana ny tsy fahombiazan'ny erythrocyte, mampitombo ny fiasan'ny rafitra hematopoietic.
1. Eo amin'ny sehatry ny sakafo dia azo ampiasaina amin'ny sakafo sy ny vokatra ara-pahasalamana ny puraria isoflavones mba hampihenana ny tosidra sy ny tavy amin'ny rà.
2. Amin'ny sehatry ny pharmaceutika, ny isoflavones puraria dia be mpampiasa amin'ny biofarmaseutika sy ny API misy ny rafitra kardiojika ao Shina. Amin'ny maha karazana fanafody fitsaboana sinoa azy, puerarin dia zava-mahadomelina mahazatra amin'ny aretim-po sy cerebrovascular.
3. Eo amin'ny sehatry ny kosmetika, ny effet pétoestrogen an'ny puerarin dia afaka manamaivana ny soritr'aretina ateraky ny fihenan'ny haavon'ny estrogen sy ny fahanterana, toy ny mastoptosis, crinkle, fihenan'ny herin'ny hoditra sy ny leukotrichia. Noho izany dia matetika ampiasaina amin'ny crème de nono, crème maso ary crème d'expile.
4. Toy ny fanafody crud ho an'ny aretim-po kardia, dia be mpampiasa amin'ny biofarmasy;
5. Miaraka amin'ny fiasa tsy manam-paharoa amin'ny fampidinana lipida dia be mpampiasa izy io raha ampiana sakafo sy vokatra ara-pahasalamana;
6. Miaraka amin'ny fiasa tsy manam-paharoa amin'ny fitapestrogen, dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny kosmetika izy io hanemorana ny fahaleovan-tena.
Fiasan'ny vovoka Shilajit
1. Izy io dia mifehy sy mifehy ny haavon'ny siramamy ao anaty ary mampiseho fihetsika hypoglycemic.
2.Mampiakatra ny fibrezan'ny fonon'ny sela.
3.Mahafaingana ny fizotran'ny metabolisma proteinina sy asidra nokleôma izy io.
4. Izy io dia miasa ho toy ny scavenger radical maimaimpoana ary manimba ny simba ataon'ny zavatra misy poizina.
5.Mba manampy amin'ny fitaterana otrikaina lalina ao anaty sela izany.
6.Miverina amin'ny laoniny ny fandanjalanjan'ny herinaratra ary manohana ny hery fiarovan'ny vatana.
7.Mba mampiroborobo ny hetsiky ny mineraly, indrindra ny calcium, phosphore ary manezioma ho lasa hozatra sy taolana hozatra.
Previous: Fitrandrahana Shilajit